QURBAJOOGA LABADA BEELOOD EE BURCO DEGAN OO BAAQ KA SOO SAARAY DALKA CANADA | Toggaherer's Weblog
QURBAJOOGA LABADA BEELOOD EE BURCO DEGAN OO BAAQ KA SOO SAARAY DALKA CANADA
Ku: Golaha garsoorka Soomaaliland,
Ku: Golaha fulinta Soomaaliland,
Ku: Golaha sharci dejinta Soomaaliland,
Ku: Dhamaan xisbiyada qaranka soomaaliland,
Ku: dhamaan qaybaha bulshada Soomaaliland.
Asalaama calaykum waraxmatulaahi wabarakaatuhu.Salaanta islaamka kadib mudanayaal iyo marwooyin sida aan la wada socono waxa dalkeena ka taagan arrin dadkoo dhami u dhegtaagayaan oo ku saabsan doorashada madaxtooyada oo dhowaan qabsoomi doonta haddii eebe raali ka noqdo.
Mudanayaal iyo marwooyin gudida doorashada ee loo igmaday shaqadan ee dhexdhexaadka ahi waxa ay soo saareen muddo ay u cayimeen inay ku qabsoonto doorashada madaxweynuhu. sida laga wada dheregsan yahay dibudhaca doorashada waxa keenay cilad xagga farsamada ah oo ka timid server-ka oo howshii xiligii loogu tala galay ku dhamayn kari waayey. Markaa waxa haboon in loo hogaansamo go,aamada ka soo baxa gudida shaqadan u xil saaran. Xisbi kastaa markii hore raali ayuu ku ahaa, wuuna ku qanacsanaa shaqsiyaadka gudidu ka kooban tahay, markaa hadda ma haboona in lasoo jeediyo eedeymo aan sal iyo raadtoona lahayn, hebel baa dhinac u xaglinaya iwm.
Haddaan intaa kaga gudbo arrimaha doorashada oo aan u soo noqdo fariinta baaqayagu xambaarsan yahay, waxaan warbaahinta kala soconay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay go,aamo iyo baaqyo lagu taageerayo shir beeleed ka dhacay Burco,caasimadda gobolka Togdheer. Shirkaas oo ay soo qaban qaabiyeen shaqsiyaad gashanaa shaad siyaasadeed,huwanaase go,yaal shaal ah iyo cimaamado oday dhaqameedyo.
Shirkaas oo bilowgii markaanu maqalay aanu soo dhoweyney anagoo u malaynaynay inuu yahay shir u dhexeeya labada beelood oo qudha,lagagana wada arinsanayo xurgufihii sida caadada ahayd dhex mari jirey labadan reer ee walaalaha ah oodwadaagtana ah. Balse la majaro habaabiyey ajandihii shirka, gabagabadiina laga soo saaray go,aamo siyaasadeed oo ay ka caaganaan jireen,meel kadhacna ku ah oday dhaqameed inuu ka hadlo.
Dhamaan shaqsiyaadkii ka qayb galay shirkaasi waxaanu u aragnaa dambiilayal qaran, waxayna jebiyeen go,aankii gooni isu taaga qaranimada Soomaaliland oo isla magaalada Burco lagaga dhawaaqay sannadkii 1991. Cidna ma ka yeelayno in magaaladii qarankani ku dhashay laga abaabulo shirar beeleedyo noocan oo kale ah oo lagu burburinayo jiritaanka qaranimada iyo sharafta Soomaaliland, mana aha in shaqsiyaad yari dantooda gaarka ah ka hore mariyaan danta guud ee qaranka.
Anigoo ku hadlaya magaca qurbajooga labada beelood ee reer Burco waxaan ka xaal marinayaa beelaha kale ee walaahayo ah ee reer Soomaaliland meel kasta ooy joogaanba shirkan lagu soo fagay xabaashii qudhunka iyo qabiilka aynu ku aasnay sannadkii 1993, inagoo ku wada balanay qalinkana ku duugnay inaynu ka guurno qabiil una guurno qaab dowli ah oo leh dastuur ku aroora shuruuc inakala hagta.
Shalay waxaynu ahayn beelo,maantana waxaynu u xuubsiibanay qaran,si wadajir ahna waa inaynu u wada ilaashanaa qaranimadeena,waana sida qudha ee aynu ku badbaadi karno,beer qurux badana aan ugu beeri karno jiilasheena dambe.
Waxaanu u soo jeedinaynaa xukuumadda,golaha wakiilada,iyo 3-da xisbi qaranba in falalka noocan oo kale ah si wada jir ah loo wada cambaareeyo.
Golaha wakiiladu waa inay soo saaraan sharci oday dhaqameedyada ka xakamaynaya inay afhayeen u noqdan xisbi gaar ah ama ay kaba hadlaan wax siyaasad ah oo ay ku ekaadaan shaqadooda oday dhaqameednimo.
Dalka waxa ka jira dowlad leh shuruuc,waxa ka jira garsoor ka duulaya sharciga iyo dastuurka aan dhiganay.
Ciddii shir beeleed siyaasadeed abaabushaa waa in loo wada aqoonsada qarandumiyayaal, lana horkeenaa sharciga.Waana in la mamnuucaa shirbeeleed dambe oo afkaartiisu ku salaysan tahay siyaasad.
Waxaanu u soo jeedinaynaa odayadii ku shiray Burco inay ka noqdaan go,aamadoodii siyaasadeed,raali gelina ka bixiyaan shirka sharci darrada ah ee ay ka qayb galeen. Cimaamada dhulka kaga dhacdayna ha ka qaadaan oo boodhka ha ka jafaan.
Dhamaan qaybaha ururada bulshada waa inay meel uga soo wada jeedaan cidda qaranimadeena wax u dhimaysa mustaqbalka dhow iyo ka fogba.
Qurbajooga labada beelood ee reer Burco ee CANADA.